Izesekeli zehhavini Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Ihhavini Izesekeli Factory
Ukuxhaswa komnyango wokupheka kwegesi
Isingeniso: Ukuxhaswa komnyango wokupheka kwegesi. Ukuxhaswa komnyango izinhlangothi ezimbili ezingakwesokunxele nangakwesokudla zingamabili. Imvamisa sebenzisa amahhavini kagesi. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-07
Isembozo sehhavini elipheka igesi
Isingeniso: Isembozo sehhavini lokupheka kwegesi. Ikhava likahhavini izinhlangothi ezimbili ezingakwesokunxele nangakwesokudla zingamabili. Imvamisa sebenzisa amahhavini kagesi. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-19
Inombolo imodeli: YL-20
Umnyango womnyango wokuphekela igesi
Isingeniso: Ihenjisi yomnyango wehhavini yokupheka igesi ingakwesokunxele nangakwesokudla izinhlangothi ezimbili. Ingibe isetshenziselwa igesi yokupheka iminyango yehhavini. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-17
Indlebe yomnyango owodwa wokupheka i-oveni yokupheka
Isingeniso: Umnyango owodwa wehhavini lendlebe yokupheka ihhavini lomnyango kungakwesokunxele nangakwesokudla izinhlangothi ezimbili. Ingibe isetshenziselwa igesi yokupheka iminyango yehhavini. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Insimbi engagqwali kushaft BBQ oven ovenpit / fork / roaster
Isingeniso: Insimbi engagqwali kushaft BBQ oven ovenpit / fork / roaster. I-Turnspit ukusetshenziswa kwamahhavini kagesi. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-18
Igalaji lokuphekela i-oven cooker hinge / spring cotter
Isingeniso: Igalaji lokuphekela i-oven cooker hinge / spring cotter. Ingibe isetshenziselwa igesi yokupheka izicabha kuhhavini noma abakhiqizi. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-11
Insimbi engagqwali shaft engunxantathu BBQ oven ovenpit / fork / roaster
Isingeniso: Insimbi engagqwali shaft engunxantathu BBQ oven ovenpit / fork / roaster. I-Turnspit ukusetshenziswa kwamahhavini kagesi. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-06
Isingeniso: Ihenjisi lomnyango wehhavini lokupheka igesi lishiyile futhi izinhlangothi ezingakwesokudla zingamabili. Ingibe isetshenziselwa igesi yokupheka iminyango yehhavini. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-04
Ihenjisi lomnyango wehhavini elincane
Isingeniso: Ihenjisi lomnyango wehhavini elincane elincane lomnyango lingakwesokunxele nangakwesokudla izinhlangothi ezimbili. Ingibe isetshenziselwa igesi yokupheka iminyango yehhavini. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-03
Izindlebe eziphindwe kabili zomnyango wokupheka wehhavini
Isingeniso:Izindlebe ezimbili zegesi yokupheka ihhavini yomnyango wesokunxele isele futhi izinhlangothi ezingakwesokudla zingamabili. Ingibe isetshenziselwa igesi yokupheka iminyango yehhavini. Izingxenyekazi zekhompiyutha zeGeriss zilungele ihhavini lasendlini, elezimboni kanye nelikagesi, ikakhulukazi uhlobo lomnyango onesisindo esingu-3 KGS - 15 KSGS isikhathi esingaphezu kweminyaka eyishumi.
Inombolo imodeli: YL-02